တိုတောင်းသော, ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားမြက်လုပ် formal ကျခငျးပထမဦးဆုံး 1700 ဝန်းကျင်ပြင်သစ်တွင်ထင်ရှားလျက်, စိတ်ကူးမကြာမီအင်္ဂလန်နှင့်ကမ္ဘာ၏ကြွင်းပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ သို့သော်မြက်ခင်းပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၏နည်းလမ်းများအလုပ်သမား-intensive, မတတ်နိုင်သောသို့မဟုတ်ကိုက်ညီမှုခဲ့ကြသည်: မြက်ခင်းပြင်ပေါ်တွင်ဒါမှမဟုတ်မြက်မြက်ခင်းပြင်-ဖြတ်လက် Scythe, တံစဉ်, ဒါမှမဟုတ်မှေးညှပျ၏အသုံးပြုမှုအားဖြင့်ကျက်စားမြက်ခင်းပထမဦးဆုံးတိရိစ္ဆာန်များရှိခြင်းအားဖြင့်သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စောင့်ရှောက်ခဲ့ကြသည်။
အဲဒီမြက်ခင်းရိတ်စက်များ၏တီထွင်မှုနှင့်အတူ 19 ရာစုအလယ်ပိုင်းအတွင်းပြောင်းလဲသွားတယ်။
တစ်ဦး "စသည်တို့ကို mowing မြက်ခင်းပြင်, အဘို့အစက်" အဖြစ်ဖော်ပြထားတဲ့စက်မှုမြက်ရိတ်စက်များအတွက်ပထမဦးဆုံးမူပိုင် Stroud, Gloucestershire, အင်္ဂလန်ကနေ, Edwin မုတ်ဆိတ်ရွက်ပေါက် (1795-1846) engineer ရန်, သြဂုတ်လ 31, 1830 ရက်တွင်ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ ရွက်ပေါက်ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုကော်ဇောများ၏ယူနီဖောင်းကိုချုံ့အတွက်အသုံးပြုမယ့်ဖြတ်တောက်ခြင်း tool ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည်။ ဒါဟာဆလင်ဒါတဝိုက်စီစဉ်ပေးဓါးသွားတစ်ခုစီးရီးခဲ့တဲ့ reel-type အမျိုးအစားရိတ်စက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယောဟနျသ Ferrabee, Thrupp စက်, Stroud မှာဖီးနစ် Foundry ၏ပိုင်ရှင်, ပထမ (ပုံဥပမာကိုကြည့်ပါ) ကိုလန်ဒန်မှာရှိတဲ့တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ထံရောင်းချခဲ့ပြီးသောရွက်ပေါက်မြက်ရိတ်စက်, ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
1842 ခုနှစ်, Scotsman အလက်ဇန္ဒား Shanks reel မြက်ရိတ်စက်ရေးဆွဲနေတဲ့ 27 လက်မအရွယ်မြင်းကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
တစ်ဦး reel မြက်ရိတ်စက်များအတွက်ပထမဦးဆုံးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမူပိုင် 1868. အစောပိုင်းမြက်ရိတ်စက်ကိုမကြာခဏမြင်းမကြာခဏမြက်ခင်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှကာကွယ်ရန်အဆမတန်ကြီးမားသားရေလုယူဝတ်ထားအတူမြင်း-ရေးဆွဲဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့ကြသည်, ဇန်နဝါရီလ 12 ရက်နေ့ကအာမရိတောင်တန်းများမှခွင့်ပြုခဲ့ခဲ့သည်။ 1870 ခုနှစ်တွင် Richmond ၏ Elwood McGuire, Indiana ပြည်နယ်ဟာအလွန်လူကြိုက်များလူ့တွန်းမြက်ရိတ်စက်ကိုဒီဇိုင်း; ဒါဟာလူ့-တွန်းဖြစ်ဖို့ပထမဦးဆုံးမဟုတ်ခဲ့စဉ်ကသူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းကအရမ်းပေါ့ပါးခဲ့စီးပွားဖြစ်အောင်မြင်မှုဖြစ်လာခဲ့သည်။
ရေနွေးငွေ့ powered မြက်ရိတ်စက်အတွက် 1890 ရဲ့ထင်ရှား။ , 1902 ခုနှစ်, ရွေးနုတ်ဖိုးထားတဲ့အတွင်းပိုင်းလောင်ကျွမ်းဓာတ်ဆီအင်ဂျင်စွမ်းအားဖြင့်ပထမဦးဆုံးစီးပွားဖြစ်ရရှိနိုင်ရိတ်စက်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့ဓာတ်ဆီစွမ်းအင်သုံးမြက်ရိတ်စက်ကိုပထမဆုံးဗိုလ်မှူးကြီး Edwin ဂျော့ခ်ျတို့က 1919 ခုနှစ်တွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြသည်။
မေလ 9, 1899 တွင်ဂျွန်အဲလ်ဘတ် Burr တစ်ခုတိုးတက်လာသော rotary ဓါးမြက်ရိတ်စက်မူပိုင်ခွင့်။
မဖြစ်စလောက်တိုးတက်မှု (ထို All-အရေးကြီးသောစီးနင်းရိတ်စက်အပါအဝင်) ရိတ်စက်နည်းပညာကြပြီနေစဉ်, အချို့မြူနီစီပယ်နှင့်ကုမ္ပဏီများတန်ဖိုးနည်း low-ထုတ်လွှတ်ရိတ်စက်ကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်စားကျက်ဆိတ်များကို အသုံးပြု. အဟောင်းနည်းလမ်းတွေပြန်ပို့ခြင်းအမှုတွင်နေကြသည်။
Lollipop ၏ Origins
အဆိုပါ Transistor ၏သမိုင်း
အဘယ်သူသည် Ouija ဘုတ်အဖွဲ့တီထွင်?
အရောအနှော 10 ဥပမာများ
တစ်ချီတုံချတုံ Engine ကိုဖြေရှင်းရာမှာ
ယင်းအဖြစ်များသည့် Core ပြည်နယ်စံနှုန်းများအချို့သည်အကောင်းအဆိုး cons ဘာတွေလဲ?
ခရူးဆိတ်: ဘုရင်ကရစ်ချတ်ငါအင်္ဂလန်၏ Lionheart
Bering Strait နှင့် Bering မြေတံတား
ထိပ်တန်းမစ်ဆူရီကောလိပ်များသို့ဝင်ရောက်ခြင်းများအတွက် SAT ရမှတ်များ
ဂျိမ်း Weldon ဂျွန်ဆင်: ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစာရေးဆရာနှင့်လူထုအခြေပြုအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူ
Verified - Verify လုပ်ဖို့
LDS အပေါ်လျင်မြန်စွာ primer (Mormonism) ဘုရားကျောင်းအယူဝါဒ
အဆိုပါ Monsters အဲဂုတ္တုပြည်၏ဒဏ္ဍာရီသတ်တဝါ
အခမဲ့ (သို့မဟုတ်နီးပါးအခမဲ့) အတွက် Homeschool လုပ်နည်း
အင်္ဂလိပ် Grammar တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်အပိုဒ်ဆိုတာဘာလဲ
အဘယ်ကြောင့်ယုဒလူတို့ Shavuot အပေါ်နို့ထွက်ပစ္စည်းကိုစားပါသလဲ
Francesco Cavalli ရဲ့အော်ပရာ '', La Calisto '' ၏ပုံပြင်
သတိရအောက်မေ့နေ့အဘို့ထိပ်တန်း 10 သီချင်းများ
တချို့ကတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများစားနွားငယ်သားဆန့်ကျင် Avidly Are အဘယ်ကြောင့်လေ့လာပါ